မသခေငျက ကွိုတငျပွီးနတျပွညျမှာဗိမာနျပေါကျနသေူရဲ့ အကွောငျး ( ဖွဈရပျမှနျလေးပါ ) - Tameelay
July 22, 2020 by daddy
မသခေငျက ကွိုတငျပွီးနတျပွညျမှာဗိမာနျပေါကျနသေူရဲ့ အကွောငျး
( ဖွဈရပျမှနျလေးပါ )
ညောငျလေးပငျဆေးရုံပျေါမှာ…သကျရှယျတျော( ၈၉ )နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ဆရာတျောကွီး ဦးဇာဂရဟာနာမကနျြးဖွဈလို့ ဆေးကုသမှု ခံယူရာကနတေဈနမှေ့ာတော့သတိလဈပွီး မမွေ့ောသှားခဲ့ပါတယျ။
အို…လှလိုကျတာလေ…ရှရေောငျတှကေ တဝငျးဝငျးစုလဈမှနျခြှနျး ထုပိကာတပျ ပွာသာဒျတှကေကွညျ့လို့မဆုံး။
ဘုံဗိမာနျတှကေလညျး ဆနျးကွယျပါဘိသနဲ့။နတျသားတှေ နတျသမီးတှအေုပျစုလိုကျ အုပျစုလိုကျ သှားနလေိုကျကွတာ။အဖွူ အပွာ အဝါ အရောငျမြိုးစုံ။
ကိုယျရောငျကိုယျဝါတှကေလညျး တောကျပ။နုနယျပြိုမွဈအသကျက( ၁၈ )နှဈ ( ၁၆ )နှဈ အရှယျလေးတှေ။
ခြောလိုကျ လှလိုကျတာ…ဆငျမွနျးထားတဲ့ စိနျတှေ ရှတှေေ ကြောကျသံပတ်တမွားတှကေလညျး မကျြစကြေိ့နျးမတတျ။ပွိုးပွိုးပွကျပွကျ တဈဖပျြဖပျြ တဈဖိတျဖိတျ။
ကောငျးကငျကွီးက…ပနျးနုရောငျတခြို့ လိမ်မျောရောငျတဈသှယျအပွာရောငျခွယျလို့။အောကျမှာနငျးထားတဲ့ မွကွေီးကလညျးအလှနျနူးညံ့တဲ့ ကမ်ဗလာကွီး ခငျးထားသလိုစိမျးစိမျးစိုစိုနဲ့။
အငျး…ငါ…ဘယျကိုမြား ရောကျနပေါလိမျ့…ဧကန်တ…ငါအခု နတျပွညျကို ရောကျနတေယျထငျပါရဲ့။သူ့ဗိမာနျနဲ့သူ စောငျးငွှငျးပတျသာ တူရိယာတှတေီးမှုတျ ကခုနျနလေိုကျကွတာ။
ဟော…ဒီ ဗိမာနျကွီးကလညျး ရှရေောငျတှဝေငျးထိနျနပေါရောလား…နတျသမီးတှကေလညျး ပွညျ့လို့။
ဘယျလို ကုသိုလျကောငျးမှုကွောငျ့မြားပါလိမျ့…ငါ မေးမွနျးကွညျ့ဦးမှပါပဲ။
အို အသငျနတျသမီးတို့…ဤဗိမာနျပိုငျရှငျကားမညျသူဖွဈပါသလဲ-? မှနျလှပါဘုရား…ဗိမာနျပိုငျရှငျက ရောကျမလာသေးပါ။လူ့ပွညျမှာပဲ ရှိနဆေဲပါဘုရား။
သကျတျောပွညျ့လို့ နစေ့ကေံ့ကုနျမှရောကျလာမှာမို့တပညျ့တျောမတို့ ပငျြးလှပါသညျဘုရား…လူ့ပွညျပွနျရောကျတဲ့အခါ ဗိမာနျပိုငျရှငျကိုတပညျ့တျောမတို့ စောငျ့မြှျောနတေဲ့ အကွောငျးပွောကွားပေးပါဘုရား…
ကောငျးပါပွီ ဒကာမတို့။ဗိမာနျပိုငျရှငျကို ပွောကွားပေးပါ့မယျ။အမညျနာမနဲ့ နထေိုငျတဲ့နရေပျဒသေကိုသာလြှောကျထားပါလေ…
မှနျလှပါဘုရား…ပဲခူးတိုငျး ဖွူးမွို့နယျ ဝဲကွီးအောကျခုံရှာကဒျေါကုလားမပါ ဘုရား…ဟော…ဆရာတျောကွီး သတိရလာပွီဟေ့…
မောငျပဉ်ဇငျးတို့…ငါပွောတာကိုစာရှကျနဲ့ သခြော လိုကျရေးထားစမျးကှဲ့။ပဲခူးတိုငျး ဖွူးမွို့နယျ ဝဲကွီးအောကျခုံရှာကဒျေါကုလားမတဲ့…
ကနျြးမာရေးအခွအေနေ ပွနျကောငျးလာတဲ့အတှကျဆရာတျောကွီးဟာ ဆေးရုံကနေ ဆငျးပွီးတဲ့အခါ
သူမှတျခိုငျးထားတဲ့ လိပျစာအတိုငျး ရဟနျးတျောနှဈပါးကိုမောငျပဉ်ဇငျးတို့…ဗိမာနျပိုငျရှငျဆီကို သှားပါ။ဘာကွောငျ့မသခေငျကပဲ နတျပွညျမှာ ဗိမာနျပေါကျတဲ့အထိဘယျလိုကုသိုလျကောငျးမှုတှမြေား ပွုလုပျသလဲလို့သခြောမေးမွနျး စုံစမျးခဲ့ပါ ဆိုပွီး ခိုငျးလိုကျပါတယျ။
ဝဲကွီးအောကျခုံရှာမှာ ဒျေါကုလားမကို မသိတဲ့လူမရှိပေ။ဒျေါကုလားမက မုဆိုးမပါ။သမီးလေးတဈယောကျနဲ့ ပဲပွုတျရောငျးစားတယျတဲ့။
ရဟနျးတျောနှဈပါးဟာ ယိုငျနဲ့နဲ့ တဲလေးထဲဝငျသှားပွီးဒျေါကုလားမနဲ့ ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျတှတေဲ့အခါဆရာတျောကွီး မိနျ့ကွားလိုကျတဲ့အတိုငျးအကြိုးအကွောငျး ပွောပွပွီးဒျေါကုလားမရဲ့ ကုသိုလျကောငျးမှုတှကေိုမေးမွနျးကွပါတယျ။
အရှငျဘုရားတို့…တပညျ့တျောမက ဆငျးရဲပါတယျဘုရား…တခွားသူတှလေို ထောငျသောငျးခြီပွီးမလှူဒါနျးနိုငျပမေဲ့မနကျအာရုဏျတဈကွိမျ နဆှေ့မျးတဈကွိမျတော့ဘုရားရှငျကိုဆှမျးကပျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျဘုရား။
ဒါနဲ့ ဒကာမကွီးရဲ့ဘုရားရှငျကို ဆှမျးကပျလှူဒါနျးပုံကိုဦးဇငျးတို့ သိပါရစေ ဒကာမကွီး။
တပညျ့တျောမဟာ မနကျအာရုဏျတကျတာနဲ့အသငျ့ခကျြပွီးတဲ့ဆှမျးကိုစားပှဲခုံနဲ့ သခြောပွငျဆငျပါတယျ ဘုရား။
လကျဆေးတျောရေ သောကျတျောရလေကျသုပျပုဝါတှအေပွညျ့အစုံတငျပွီးသကျတျောထငျရှား ဘုရားရှငျကိုယျတိုငျကွှရောကျဘုနျးပေးနသေလို အာရုံပွုလို့ဒါက လကျဆေးတျောပါ ဘုရား ဒါက သောကျတျောရပေါ ဘုရားလို့လြှောကျထားဆကျကပျအနားကနေ ယပျခတျပွီးတော့လှူဒါနျးပါတယျ ဘုရား…
ပဲပွုတျပါပဲဘုရား…တပညျ့တျောမလညျး သူမြားတှလေိုသားငါးနဲ့သခြောခကျြပွုတျပွီး လှူဒါနျးခငျြပမေယျ့မတတျနိုငျတဲ့အတှကျနစေ့ဉျ ပဲပွုတျနဲ့သာ လှူဒါနျးနိုငျပါတယျ။
တခါတရံ ဈေးရောငျးပွီးပွနျလာတဲ့အခါငနုပျငဖှဲလေးမြား ဝယျလာပွီးတပညျ့တျောတို့မစားပဲ ဘုရားရှငျကိုသာလှူဒါနျးပါတယျဘုရား…
ကောငျးလိုကျတာ ဒကာမကွီးရယျ…ဦးဇငျးတို့ လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ သာဓုချေါပါတယျ။
အငျး…ဒကာမကွီးရဲ့ အားကွီးတဲ့သဒ်ဓါတရားကွောငျ့နတျပွညျမှာဗိမာနျ ကွိုပေါကျနတောကိုး…
ဒါနဲ့ ခုလိုလှူဒါနျးခဲ့တာဘယျလောကျမြားကွာပွီလဲ ဒကာမကွီး-?မှနျလှပါ…သမီးလေးတဈသကျ အနှဈနှဈဆယျ တိုငျခဲ့ပါပွီဘုရား …ဒကာမကွီးရဲ့ကုသိုလျကိုဦးဇငျးတို့ကိုလညျး အမြှပေးဝပေါ ဒကာမကွီး။
တပညျ့တျောမသညျ…ဘုရားရှငျအားရညျမှနျး၍ နစေ့ဉျဝတျမပွတျအာရုဏျဆှမျး နဆှေ့မျးမြားဆပျကပျလှူဒါနျးရသော ကောငျးမှုကုသိုလျအစုစုတို့ကိုအရှငျဘုရားတို့နှငျ့တကှ သုံးဆယျ့တဈဘုံသားအားလုံးတို့အားအမြှ အမြှ အမြှပေးဝငှေပါကုနျ၏။
အားလုံးကွားကွားသမြှအမြှ အမြှ အမြှ ယူတျောမူကွပါကုနျလော့…
မူရငျးရေးသားသူအားလေးစားစှာဖွငျ့ Credit ပေးပါသညျ ။
မသေခင်က ကြိုတင်ပြီးနတ်ပြည်မှာဗိမာန်ပေါက်နေသူရဲ့ အကြောင်း
( ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ )
ညောင်လေးပင်ဆေးရုံပေါ်မှာ…သက်ရွယ်တော်( ၈၉ )နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီး ဦးဇာဂရဟာနာမကျန်းဖြစ်လို့ ဆေးကုသမှု ခံယူရာကနေတစ်နေ့မှာတော့သတိလစ်ပြီး မေ့မြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အို…လှလိုက်တာလေ…ရွှေရောင်တွေက တဝင်းဝင်းစုလစ်မွန်ချွန်း ထုပိကာတပ် ပြာသာဒ်တွေကကြည့်လို့မဆုံး။
ဘုံဗိမာန်တွေကလည်း ဆန်းကြယ်ပါဘိသနဲ့။နတ်သားတွေ နတ်သမီးတွေအုပ်စုလိုက် အုပ်စုလိုက် သွားနေလိုက်ကြတာ။အဖြူ အပြာ အဝါ အရောင်မျိုးစုံ။
ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေကလည်း တောက်ပ။နုနယ်ပျိုမြစ်အသက်က( ၁၈ )နှစ် ( ၁၆ )နှစ် အရွယ်လေးတွေ။
ချောလိုက် လှလိုက်တာ…ဆင်မြန်းထားတဲ့ စိန်တွေ ရွှေတွေ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေကလည်း မျက်စေ့ကျိန်းမတတ်။ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် တစ်ဖျပ်ဖျပ် တစ်ဖိတ်ဖိတ်။
ကောင်းကင်ကြီးက…ပန်းနုရောင်တချို့ လိမ္မော်ရောင်တစ်သွယ်အပြာရောင်ခြယ်လို့။အောက်မှာနင်းထားတဲ့ မြေကြီးကလည်းအလွန်နူးညံ့တဲ့ ကမ္ဗလာကြီး ခင်းထားသလိုစိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့။
အင်း…ငါ…ဘယ်ကိုများ ရောက်နေပါလိမ့်…ဧကန္တ…ငါအခု နတ်ပြည်ကို ရောက်နေတယ်ထင်ပါရဲ့။သူ့ဗိမာန်နဲ့သူ စောင်းငြှင်းပတ်သာ တူရိယာတွေတီးမှုတ် ကခုန်နေလိုက်ကြတာ။
ဟော…ဒီ ဗိမာန်ကြီးကလည်း ရွှေရောင်တွေဝင်းထိန်နေပါရောလား…နတ်သမီးတွေကလည်း ပြည့်လို့။
ဘယ်လို ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်များပါလိမ့်…ငါ မေးမြန်းကြည့်ဦးမှပါပဲ။
အို အသင်နတ်သမီးတို့…ဤဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကားမည်သူဖြစ်ပါသလဲ-? မှန်လှပါဘုရား…ဗိမာန်ပိုင်ရှင်က ရောက်မလာသေးပါ။လူ့ပြည်မှာပဲ ရှိနေဆဲပါဘုရား။
သက်တော်ပြည့်လို့ နေ့စေ့ကံကုန်မှရောက်လာမှာမို့တပည့်တော်မတို့ ပျင်းလှပါသည်ဘုရား…လူ့ပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကိုတပည့်တော်မတို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ အကြောင်းပြောကြားပေးပါဘုရား…
ကောင်းပါပြီ ဒကာမတို့။ဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကို ပြောကြားပေးပါ့မယ်။အမည်နာမနဲ့ နေထိုင်တဲ့နေရပ်ဒေသကိုသာလျှောက်ထားပါလေ…
မှန်လှပါဘုရား…ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နယ် ဝဲကြီးအောက်ခုံရွာကဒေါ်ကုလားမပါ ဘုရား…ဟော…ဆရာတော်ကြီး သတိရလာပြီဟေ့…
မောင်ပဉ္ဇင်းတို့…ငါပြောတာကိုစာရွက်နဲ့ သေချာ လိုက်ရေးထားစမ်းကွဲ့။ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နယ် ဝဲကြီးအောက်ခုံရွာကဒေါ်ကုလားမတဲ့…
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ပြန်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးဟာ ဆေးရုံကနေ ဆင်းပြီးတဲ့အခါ
သူမှတ်ခိုင်းထားတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း ရဟန်းတော်နှစ်ပါးကိုမောင်ပဉ္ဇင်းတို့…ဗိမာန်ပိုင်ရှင်ဆီကို သွားပါ။ဘာကြောင့်မသေခင်ကပဲ နတ်ပြည်မှာ ဗိမာန်ပေါက်တဲ့အထိဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများ ပြုလုပ်သလဲလို့သေချာမေးမြန်း စုံစမ်းခဲ့ပါ ဆိုပြီး ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ဝဲကြီးအောက်ခုံရွာမှာ ဒေါ်ကုလားမကို မသိတဲ့လူမရှိပေ။ဒေါ်ကုလားမက မုဆိုးမပါ။သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပဲပြုတ်ရောင်းစားတယ်တဲ့။
ရဟန်းတော်နှစ်ပါးဟာ ယိုင်နဲ့နဲ့ တဲလေးထဲဝင်သွားပြီးဒေါ်ကုလားမနဲ့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တွေ့တဲ့အခါဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းအကျိုးအကြောင်း ပြောပြပြီးဒေါ်ကုလားမရဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးမြန်းကြပါတယ်။
အရှင်ဘုရားတို့…တပည့်တော်မက ဆင်းရဲပါတယ်ဘုရား…တခြားသူတွေလို ထောင်သောင်းချီပြီးမလှူဒါန်းနိုင်ပေမဲ့မနက်အာရုဏ်တစ်ကြိမ် နေ့ဆွမ်းတစ်ကြိမ်တော့ဘုရားရှင်ကိုဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ဘုရား။
ဒါနဲ့ ဒကာမကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ကို ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းပုံကိုဦးဇင်းတို့ သိပါရစေ ဒကာမကြီး။
တပည့်တော်မဟာ မနက်အာရုဏ်တက်တာနဲ့အသင့်ချက်ပြီးတဲ့ဆွမ်းကိုစားပွဲခုံနဲ့ သေချာပြင်ဆင်ပါတယ် ဘုရား။
လက်ဆေးတော်ရေ သောက်တော်ရေလက်သုပ်ပုဝါတွေအပြည့်အစုံတင်ပြီးသက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ဘုန်းပေးနေသလို အာရုံပြုလို့ဒါက လက်ဆေးတော်ပါ ဘုရား ဒါက သောက်တော်ရေပါ ဘုရားလို့လျှောက်ထားဆက်ကပ်အနားကနေ ယပ်ခတ်ပြီးတော့လှူဒါန်းပါတယ် ဘုရား…
ပဲပြုတ်ပါပဲဘုရား…တပည့်တော်မလည်း သူများတွေလိုသားငါးနဲ့သေချာချက်ပြုတ်ပြီး လှူဒါန်းချင်ပေမယ့်မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်နေ့စဉ် ပဲပြုတ်နဲ့သာ လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
တခါတရံ ဈေးရောင်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါငနုပ်ငဖွဲလေးများ ဝယ်လာပြီးတပည့်တော်တို့မစားပဲ ဘုရားရှင်ကိုသာလှူဒါန်းပါတယ်ဘုရား…
ကောင်းလိုက်တာ ဒကာမကြီးရယ်…ဦးဇင်းတို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သာဓုခေါ်ပါတယ်။
အင်း…ဒကာမကြီးရဲ့ အားကြီးတဲ့သဒ္ဓါတရားကြောင့်နတ်ပြည်မှာဗိမာန် ကြိုပေါက်နေတာကိုး…
ဒါနဲ့ ခုလိုလှူဒါန်းခဲ့တာဘယ်လောက်များကြာပြီလဲ ဒကာမကြီး-?မှန်လှပါ…သမီးလေးတစ်သက် အနှစ်နှစ်ဆယ် တိုင်ခဲ့ပါပြီဘုရား …ဒကာမကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကိုဦးဇင်းတို့ကိုလည်း အမျှပေးဝေပါ ဒကာမကြီး။
တပည့်တော်မသည်…ဘုရားရှင်အားရည်မှန်း၍ နေ့စဉ်ဝတ်မပြတ်အာရုဏ်ဆွမ်း နေ့ဆွမ်းများဆပ်ကပ်လှူဒါန်းရသော ကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုအရှင်ဘုရားတို့နှင့်တကွ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံသားအားလုံးတို့အားအမျှ အမျှ အမျှပေးဝေငှပါကုန်၏။
အားလုံးကြားကြားသမျှအမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်လော့…
မူရင်းရေးသားသူအားလေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည် ။
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 22 Post navigation